बाँचियो भने नाफा त अर्को साल कमाउँला, यो संकटका बेला सबै बैंकका कर्जाका ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ । – Yuwa Aawaj
बाँचियो भने नाफा त अर्को साल कमाउँला, यो संकटका बेला सबै बैंकका कर्जाका ब्याज मिनाहा हुनुपर्छ ।
बैसाख २२, २०७८ बुधबार 824
काठमाडौँ : पूराना बैंकर एवम् हाल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिलो व्यवस्थालाई ‘डु’बाउने खेल’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उद्योगी ब्यबसायीलाई चैत्रको बैकं ऋृ’णको सावा ब्याज किस्ता असार मसान्तमा तिर्ने ब्यवस्था राहत नभई डुबाउने खेल भएको भन्दै उनले राहतको प्याकेज आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उद्योग व्कोयवसायको हितअका लागि उनले निम्न सु’झावहरुसमेत दिएका छन्।
१) उद्योगी व्लायवसायीहरुलाई चैत्रको बैकं ऋृ’णको सावा ब्याज किस्ता असार मसान्तमा तिर्ने ब्यवस्था राहत नभइ डुबाउने खेल हो । लकडाउनको चेन असर असार पछिसम्म जान्छ । कारोबार नियमित र राम्रो हुदैन ।क्यासफ्लो नभएको अवस्थामा ३ महिनाको तिर्न नसक्नेले ६ महिनाको कसरी सक्छ ?
२) उद्योग ब्यवसाय चलेमा बैकं पनि चल्ने र सरकारले पनि कर पाउने तथा रोजगारी बृ’द्धिलगायत समग्र अ’र्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैले उद्योग व्यवसायको संरक्षण र बिकास नै प्रमुख कुरा रहेक‍ो बुझ्नु जरुरी छ।
३) बैकंहरु नाफा कमाउने संस्था हुन् । सधै कमाएका पनि छन् ।तर अहिले बाच्ने र बचाउने बेला हो । बाचे भने फेरि कमाउन पाईन्छ । त्यसैले बैकंका ऋणिहरुको ३ महिनाको ब्याज असारको ब्याल्न्स सिट नेगे’टिभ हुनेगरी पूर्णतः मिनाहा गर्नुपर्छ । नेगेटिभ हुनेको हकमा ब्याले|न्ससिट पोजेटिभ बनाउने जति रकम सरकारले बैकंलाई राज्यकोषबाट सब्सिडि दिनुपर्छ ।
४) महामारिमा एक बर्ष लाभांश नपाउदा कुनै शेयरधनीले बिरोध गर्दैनन । मेरो नि बैकं बिमामा शेयर छ, मलाई कुनै आपत्ति छैन । उद्योग ब्यवसाय चलेमा तथा बैकं र हामी रहेमा न नाफा खाने कुरा आउँछ ।
५) सरकारले पनि नाफाखोरि सोच हटाई बैकंहरुलाई ३०% को सट्टा २०% र उद्योग व्यवसायलाई २५% को सट्टा १५% कर मात्र लिने घोषणा गरि महा’संकटको बेला उदार मन देखाई राहत दिनुपर्छ।
६) उद्योग ब्यवसायले खपत गर्ने विद्युतमा बिध्युत प्राधिकरणको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि सके जति छुट दिनु पर्छ । कर्मचारिको रोजगारी बचाउन पारिश्रमिक करमा छुट दिएर तेति रकम तलबमा घटाउन पाउने गरि उद्योगकलाई खर्च कम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
७) नागरिक रहेमा उद्योग ब्यवसाय चल्ने ह‍ो, उद्योग ब्यवसाय रहेमा बैकं चल्ने ह‍ो र बैकं च’लेमा अर्थ’तन्त्र राम्रो भई देश रहने हो। यो कुरा बुझि उदारता देखाउ । आफु नि बाचौं,अरु सबैलाई नि बचाउँ। यो खबर अर्थ सरोकारबाट साभार गरीएको।
Prevसरकारी कार्यालय, संघसंस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द ।
Nextप्रधानमन्त्री ओलीलाई झाँक्रीको चेतावनी – हामी डुबाएरै छोड्छौँ ।
ब्रेकिङ् – दुई गतेपछि पुनः कडा निषे-धाज्ञा !
अंगुर खाँदा हुने १३ भन्दा बढि फाइदाहरु थाहा पाउनुहोस ।
बधाई ! भरतपुरका युवा समिपले पत्ता लगाए फेसबुकको कमजोरी, ३१२५ अमेरिकी डलर पुरस्कार ।